အားလုံးဘတ်တဲ့ တီချမ်း: တက္ကစီ ခရီးသည်
Posted by တီချမ်း at 2:43 PM
Rita July 20, 2010 at 4:08 PM
တကယ် ကွဲတဲ့ အသည်းနဲ့ ရေးလို့လားတော့ မသိ။
အန်တီချမ်း July 20, 2010 at 4:55 PM
naydanalynn: ဖတ်ပြီးပြီ တီ.. ကိုယ်စိတ်ပါတဲ့ တစ်ယောက်ယောက် စောင့်နေတဲ့အခါ ၊ စိတ်ဆိုးလွန်းလို့ ပါးရိုက်ဖို့ သွားမဲ့အခါ တွေများမှာပဲ တက္ကစီစီးဖို့ စိတ်ကူးရတယ်။ :P
စိတ်ညစ်ရင် ကိုယ်ချစ်ရက်နဲ့ စိတ်ပါရက်နဲ့ သူများပစ်သွားလို့ စိတ်မကောင်းနေချိန်မှာတော့ တွေ့တဲ့ ဘတ်စ်ပေါ် ငေါင်ငေါင်လေး စိတ်နဲ့ကိုယ် မကပ်ပဲ တက်လိုက်သွားတာ
အန်တီချမ်း July 20, 2010 at 4:56 PM
အန်တီချမ်း July 21, 2010 at 12:04 AM
David Aye Myat - ဒီ ပို့ စ်ရေးပြီးတဲ့အချိန်က ရုံးချိန်ကြီးနော်။ တက်စီပေါ်ရောက်နေတာလား။ မွန်းကျပ်ရင် အတင်းလှမ်းတုပ်လို့ ရပါတယ်။7:38 pmDeleteUndo deleteReport spamNot spam
Hnin Su - သယ်ရင်း . . . နင် အသည်းကွဲတဲ့နည်းနဲ့သာ ကွဲရမယ်ဆိုရင် အီစကိုတို့တော့ သေပြီ . . . တက္ကစီ ခ အလုံအလောက်ရှိမှရမှာ . . . ဘာပဲပြောပြော နင်အဲလို အသည်းကွဲခွင့်ရတာ တော်တော်ကံကောင်းတယ် :)8:58 pm